स्वस्तिमाको अपिल : महामारीले प्रभावित फिल्म प्राविधिकलाई सहायता गरौं - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी स्वस्तिमाको अपिल : महामारीले प्रभावित फिल्म प्राविधिकलाई सहायता गरौं
स्वस्तिमाको अपिल : महामारीले प्रभावित फिल्म प्राविधिकलाई सहायता गरौं
कोरोना महामारीले दैनिक कामकाज लगभग ठप्प छन।धेरै आम्दानी गरि बचत गर्नेहरुलाई दैनिकी चलाउन असर नगरे पनि दैनिकी गुजारा तथा थोरै आम्दानी भै धेरै बचत गर्न नसक्नेहरुका लागि भने कोरोनाभाइरस महामारीले धेरै नै प्रभावित गरेको छ र यो महामारिबाट फिल्म क्षेत्र अनि फिल्म क्षेत्रमा पनि प्राविधिकलाई निकै कठिन भैरहेको छ त्यसैले फिल्म प्राविधिकहरुलाई सघाउन कलाकार कस्सिएका छन् । अक्सिजन सिलिन्डर जोहो गर्नेदेखि प्राविधिकलाई राहत संकलन गर्न उनीहरु सक्रिय भएका छन् । कतिपयले गच्छेअनुसार सहयोग गर्न अपिल गरिरहेका छन् ।
ढिलै भएपनी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले सामाजिक संजालमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै महामारीले प्रभावित फिल्म प्राविधिकलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेकी छिन् । गच्छेअनुसार आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्न स्वस्तिमाको आग्रह छ । उनले जारी गरेको भिडियोपछि धेरैले प्राविधिकहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भिडिओमा स्वस्तिमाले भनेकी छिन्, ‘यतिबेला हामी असामान्य परिस्थितिमा छौं । यस्तो बेला सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र पर्न सकेको छैन । कोरोनाका कारण अहिले चलचित्रहरु बनिरहेका छैनन् । जसले गर्दा सबैभन्दा बढी समस्यामा चलचित्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरु परेका छन् । प्राविधिकहरुलाई छाक टार्न समेत समस्या रहेको भन्ने समाचारहरु पढ्दा म निकै भावुक भएको छु ।’
तीन सयमध्ये सय जना प्राविधिकको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको जानकारी पाएपछि आफ्नो चिनजानका व्यक्ति र आफू आबद्ध ब्रान्डहरुलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेको र सबैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वस्तिमाले भिडिओमा बताएकी छिन् ।
स्वस्तिमाले प्राविधिकहरुलाई सहयोग गर्न चाहनेले इसेवा आइडी ९८४१०१७७६४ या कुमारी बैंकको डिजिटल क्यूआर कोर्डमार्फत् सहयोग पठाउन सक्ने बताएकी छन् ।
‘सबै प्राविधिकहरुलाई उस्तै समस्या नहुनसक्छ । विशेषगरी स्पट ब्वाईहरुलाई समस्या छ । उहाँहरुले थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्नुहुन्छ । फिल्ममा काम गर्दा म उहाँहरुसँग एकदमै क्लोज पनि हुन्छु । उहाँहरुले हामीलाई बिहान उठाउनेदेखि चिया/खाना ल्याइदिनेसम्मको काम गर्नुहुन्छ । यो बेला हामीले उहाँहरुलाई सानो सहयोग गर्न सक्यौं भने पनि ठूलो हुन्छ,’ उनले भनेकी छन् ।
Previous articleनेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सरकारी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिँदै, मूल्य कति ?
Next articleअमेरिकाद्धारा नेपाललाई कोभिड-१९ खोप उपलब्ध गराउने घोषणा
सिभिल अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण
आजको मौसम: कहाँ कहाँ बर्षा कहाँ कहाँ हिमपात? आगामी ३ दिनको मौसम यस्तो छ